रचना र एलिनाको गाउँ झापाकै यी चेली रुदै आईन्, सबैलाई चकित पार्ने जादुमय आवाज (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > रचना र एलिनाको गाउँ झापाकै यी चेली रुदै आईन्, सबैलाई चकित पार्ने जादुमय आवाज (भिडियो हेर्नुस)
admin December 12, 2020 December 12, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाचार, समाज	0
झापाबाट नयाँ नयाँ न्युज नेपालको स्टुडियोमा आएकी प्रतिभाशाली सकुन्तला प्रसाई बहिनी धुरुधुरु रोईन् । निकै नै सुमधुर आवाज भएकी सकुन्तला आफ्नो केहि बर्ष अगाडि बित्नु भएको बुवा सम्झेर भक्कानिईन् । ठुलो गायिका बन्ने सपना बोकेकी उनको घरमा ५ दिदी बहिनी छन् र उनी कान्छी हुन् । २२ बर्षकी सकुन्तला १० कक्षासम्मका बिद्यार्थीहरुलाई पढाउँछिन् ।
चलेका गायिकाहरुकै स्तरको गीत गाउने सकुन्तलाको नयाँ गीत पनि बजारमा आएको छ । चरी भरर बोलको गीतमा उनीसँगै तिलक बस्नेतको आवाज छ भने गीतमा प्रेम भारती र आलिशा बास्तोलाको अभिनय रहेको छ । अन्तर्वार्तामै रोईहँदा उनले युवाहरुका लागि निकै नै मनछुने सन्देश पनि दिईन् ।
जानि राखौं ! यस्ता पाँच काम गरेमा आफ्नो मनले चिताएको पुरा हुन्छ, ॐ लेखि पूरा पढ्नुहोस् मिल्नेछ तपाईको जीवनमा ठूलो सफलता!
पुष्पा अधिकारीको केयर बालगृहमा चल्यो रुवाबासी, बालबालिका भन्छन् ‘हामीलाई पुष्पा आमा नै चाहिन्छ’ (भिडियो हेर्नुस्)